သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): နေရာတိုင်း၌ သရဲရှိလေသလော ??????
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 19:18
ညသန်းခေါင်ကျော်မှ ဖတ်မိရက်သားဖြစ်နေပြီ ...းDသရဲဆိုတဲ့ အသံကြားလိုက်တာနဲ့ အော်တိုမစ်တစ် စိတ်ဝင်စားပြီးသားဖြစ်သလို ခေါင်းမဖော်ရဲအောင်လဲ ကြောက်ပြီးသားး))
Friday, 21 May 2010 at 20:24:00 BST
တော်ကြာ ဖျားလို့သရဲပါဆေးရုံတက်ရတယ် ဖြစ်နေပါဦးမယ်...
ကိုကိုမောင်.. တော်တော်ဆိုးး)း)
Friday, 21 May 2010 at 20:41:00 BST
Saturday, 22 May 2010 at 00:51:00 BST
အကိုရေ နာနာဘဝ ဝိနာဘဝဆိုတာ ဘုရားလက်ထက်တော်ထဲက အမှန် ရှိခဲ့တာမို့ အခုလို ထူးခြားဖြစ်စဉ်မျိုး နောက်ကြုံရင် မကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့ သတ္တဝါတွေကို အမျှဝေပေးရင် ပိုကောင်းမလားလို့ အကြံပြုပါတယ် စာမေးပွဲ ပြီးသွားပြီလား ပျော်ရွှင်ပါစေ။
Saturday, 22 May 2010 at 03:02:00 BST
နိဂုံးပိုဒ်မရောက်ခင်က အယူအဆလေး ခုမှမြင်ဖူးတယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်း မပြောနိုင်။
Saturday, 22 May 2010 at 03:04:00 BST
Saturday, 22 May 2010 at 03:43:00 BST
ကြက်သရဲ ဝက်သရဲ ဆိတ်သရဲ ကြုံမှကြုံရပလေ...
Saturday, 22 May 2010 at 03:55:00 BST
အနားမှာ MP-3 player လေးရှိလို့တော်သေးတာပေါ့ မဟုတ်ရင် ကိုကိုမောင်တို့ ဒီလောက်အေးတဲ့နေရာမှာ ချွေးရေချိုးသလိုဖြစ်သွားမလားပဲး)))
ဇွန်မပြောသလို အမျှဝေပေးရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်။
Saturday, 22 May 2010 at 05:29:00 BST
တစ်ကယ်လား စိတ်ကူးယဉ်လား. စိတ်တော့ဝင်စားစရာဘဲ.။ သားကြီးင်းကြီးမစားရဲဘူး အတုံးသေးသေးလေးတုံးမှ စားရဲတယ်။ ကြက်သားကောင်လိုက်တွေ ပေါင်လိုက်တွေ ငါးအကောင်လိုက်တွေ မစားရဲဘူး.သေးသေးလေးတွေ ဆိုရင်တော့စားတယ်။
Saturday, 22 May 2010 at 05:40:00 BST
ခွေးသရဲ ဆိတ်သရဲ ဝက်သရဲ ကြက်သရဲ
ကိုကိုမောင် အစား ဆဲပေးတာ
Saturday, 22 May 2010 at 10:24:00 BST
ခွန်က ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ ဖတ်ကိုမဖတ်တော့တာ....
Saturday, 22 May 2010 at 10:55:00 BST
နားနေရင်းကနေ တရားတွေရလာလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေး
သာဓု သာဓု သာဓု - - - မေမေတို့ အဖွားတို့ ပြောတာတော့မှတ်ဖူးတယ်-ဈေးကပြန်လာလို့ူကက်-ဝက်ဝယ်လာတာကိုခြင်းတောင်းအပေါ်ဆုံးကိုလူမြင်
အဲဒီအသေကောင်တွေကိုေုက်ာတမျိုး လှော်တဖုံ
Saturday, 22 May 2010 at 15:35:00 BST
ဖတ်လို့လည်းကောင်း၊ ဗဟုသုတလည်းရ... ကိုကိုမောင်ရဲ့ အတွေးကို လိုက်ပြီး စဉ်းစားမိတော့ မှ အတွေးတွေ အများကြီးဝင်လာပြီ
Saturday, 22 May 2010 at 18:01:00 BST
အိမ်းးးးးးးးး သရဲ သရဲ
ကောင်းတယ်ဖတ်ရတာ ညဘက်ဖြစ်နေတယ် ဟိ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ပါဘူး နော် ဟက် ဟက်
Saturday, 22 May 2010 at 22:18:00 BST
Sunday, 23 May 2010 at 11:28:00 BST
ကြုံရပလေ .. :D
ညီမကတော့ ဘာသရဲလာလာ ကြောက်ပါတယ် .. :D
Monday, 24 May 2010 at 01:14:00 BST
Monday, 24 May 2010 at 19:59:00 BST
Tuesday, 25 May 2010 at 15:46:00 BST
တကယ်ကြီးလားလို့တွေးပေမယ့် တရားသဘောက ပိုမြင်သာနေမိတယ်။
လူပါးစပ် သင်္ချိုင်းက ဆီပြန်လေးမှ အချိုလေမှ အစပ်လေးမှ ပိုအဝင်ကောင်းတယ် ဆိုပဲ။
(မအားမလပ်လို့ ခုမှ လာအားပေးရတာ ခွင့်လွှတ်ဗျာ)
Tuesday, 25 May 2010 at 19:05:00 BST
တကယ့် အ့ဖြစ်အပျက်မဟုတ်ရင်ဒီလောက် ကောင်းအောင်မရေးနိုင်ဘူးထင်တယ်။
တကယ့် ကို ကောင်းလွန်းနေတယ်။
Tuesday, 1 June 2010 at 04:53:00 BST